बलिउडका पाँच धनाड्य अभिनेत्रीको वार्षिक आम्दानी कति ? – ramechhapkhabar.com
बलिउडका पाँच धनाड्य अभिनेत्रीको वार्षिक आम्दानी कति ?
मुम्बई– सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बलिउडका अभिनेता–अभिनेत्रीहरु लग्जरी जीवन बाँच्छन् । उनीहरुको जीवनशैली देखेर सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वभाविकै हो । फिल्म उद्योगका केही लोकप्रिय अनुहारहरुले सफलताको शिखर चुमे भने कोहि फ्लप पनि भए । तर फ्लप भएका केही कलाकारको आम्दानी थाहा पाउँदा समेत मानिसहरु आश्चर्यमा पर्छन् ।
आज हामी केही त्यस्ता अभिनेत्रीहरुको बारेमा चर्चा गर्दै छौं, जसको आम्दानि सुनेर अचम्म लाग्न सक्छ :
यो सूचीमा तेस्रो नाम अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको रहेको छ । दीपिकाले धेरै लोकप्रिय फिल्महरुबाट दर्शकहरु माझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल छिन् । दीपिकाले एक से एक हिट फिल्म दिएकी छिन् । जसका कारण उनी सबैभन्दा धनी अभिनेत्रीको लिस्टमा समावेश छिन् । दीपिकाको वार्षिक कमाई ४५ मिलियन डलर रहेको छ ।
मिस वर्ल्डसमेत रहेकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले भारतमा मात्र नभइ भारतबाहिर पनि आफ्नो भिन्दै पहिचान बनाएकी छिन् । भर्खरै प्रियंकाले न्यूयोर्कमा आफ्नै रेष्टुराँ खोलेकी छिन् , जसको नाम सोना हो । उक्त रेष्टुराँमा भारतीय व्यञ्जन खान पाइन्छ । प्रियंकाको आम्दानीको कुरा गर्नु पर्दा उनी एक वर्षमा ४० मिलियन डलर कमाउँछिन् । प्रियंका बलिउडकी दोस्रो सबैभन्दा धनी अभिनेत्री हुन् ।
बलिउडमा बेबो नामले प्रख्यात अभिनेत्री करीना कपूर खान आज पनि फिल्ममा सक्रिय छिन् । उनीसंग अहिले पनि फिल्मको लाइन छ । करीना कपूर हरेक वर्ष फिल्म र विज्ञापनहरुबाट करिब ३५ देखि ३७ मिलियन डलर कमाउँछिन् ।
सबैभन्दा बढि आम्दानी गर्ने अभिनेत्रीको कुरा गर्नु पर्दा ऐश्वर्या राय बच्चनको नाम पहिलो स्थानमा आउँछ । ऐश्वर्याले फिल्म क्षेत्रसंग केहि दूरी बढाएता पनि आज पनि उनी हिट छिन् । ऐश्वर्याले ‘और प्यार हो गया’ बाट फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी थिइन् । उनले फिल्मबाटै करिव ३५ मिलियन डलर भन्दा बढि आम्दानी गरेकी छिन् ।
अभिनेत्री काजोल आज पनि फिल्ममा आफ्नो कुशल अभिनयका लागि परिचित छिन् । भर्खरै उनको शर्ट फिल्म ‘देवी’ लाई फिल्मफेयर पुरस्कार पनि प्राप्त भएको छ । काजोलले प्रायस् सबै अभिनेतासंग फिल्ममा काम गरेकी छिन् तर उनको र शाहरुख खानको जोडी फिल्ममा हिट मानिन्छ । काजोलको वार्षिक कुल सम्पत्तिको कुरा गर्नु पर्दा करिव १८ मिलियन डलर रहेको छ ।